लकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक विद्यालयबाट निष्कासित ! - Birgunj Sanjalलकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक विद्यालयबाट निष्कासित ! - Birgunj Sanjalलकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक विद्यालयबाट निष्कासित ! - Birgunj Sanjal
लकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक विद्यालयबाट निष्कासित !
११ असार २०७८, शुक्रबार १३:०८
वीरगन्ज । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-८ स्थित लिटिल बड इङ्लिस सेकेण्डरी स्कूलमा वीरबहादुर धिमालले २५ वर्ष पढाए । ५० वर्षीय धिमालको आयस्रोत त्यही स्कूल थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उनले सदाका लागि रोजगारी गुमाएका छन् ।